Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram na naanị nkeji 1 | Nzukọ Ekwentị
Hichapụ akaụntụ Instagram Ọ bụ usoro yiri nnọọ hichapụ akaụntụ FacebookMaka ebumnuche, ụlọ ọrụ abụọ ahụ bụ otu akụkụ. Dị ka ụlọ ọrụ, ịchọrọ ijide ndị ọrụ / ndị ahịa gị ka o kwere mee, Instagram na-enye anyị ụzọ abụọ iji kwụsị iji ikpo okwu a, nke ọ bụla nwere ebumnuche dị iche.
N'otu aka, anyị na-ahụ nhọrọ nke na-enye anyị ohere iwepu akaụntụ ahụ nwa oge na nke ọzọ, anyị nwere nhọrọ iji kpochapụ akara anyị kpamkpam na netwọkụ mmekọrịta a. Onye ọ bụla n'ime nhọrọ abụọ a, na-enye anyị nsonaazụ dị iche iche, ya mere, anyị ga-edo anya nke ọma ihe nhọrọ abụọ ahụ na-enye anyị.
1 Gbanyụọ ma ọ bụ hichapụ akaụntụ Instagram
1.1 Deactivate akaụntụ m nwa oge
1.2 Ihichapụ akaụntụ m kpamkpam
2 Budata ọdịnaya niile bipụtara na Instagram
3 Etu esi gbanyụọ akaụntụ Instagram m nwa oge
4 Regain eji nke agbanyụọ akaụntụ
5 Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram m kpamkpam
6 Otu esi nwetaghachi akaụntụ Instagram ehichapụ
Gbanyụọ ma ọ bụ hichapụ akaụntụ Instagram
Deactivate akaụntụ m nwa oge
Dịka anyị nwere ike ịkọwapụta aha nke nhọrọ ndị a, nke ọ bụla nwere mmetụta dị iche na ọnọdụ nke akaụntụ anyị. Usoro a na - akpọ deactivating the Instagram account allows us to nwa oge kwụsị ọrụ anyị n'elu ikpo okwu a ogologo oge anyị chọrọ.
N'ụzọ dị otú a, akaụntụ anyị dum ga-ezonahụ onye ọ bụla. Ma foto anyị, nkọwa na mmasị ga-ezo ruo mgbe anyị abanye na akaụntụ ahụ ọzọ, ebe ọ bụ na n'oge ahụ, ikpo okwu ghọtara na ịchọrọ iji netwọkụ mmekọrịta a ọzọ.
Ihichapụ akaụntụ m kpamkpam
Kama nke ahụ, nhọrọ Hichapụ akaụntụ Instagram na-eche hichapụ profaịlụ anyị kpamkpam na netwọkụ mmekọrịta a yana ya, hichapụ ọdịnaya niile nke anyị bipụtara kemgbe anyị mepere akaụntụ ahụ, yabụ ọ naghị afụ ụfụ ịme ndabere nke ọdịnaya niile anyị bipụtara.
Ozugbo anyị gosipụtara na anyị chọrọ ihichapụ akaụntụ Instagram, anyi nwere agugu ubochi 30 la azu, nke ahụ bụ, ịkagbu nhichapụ nke akaụntụ ahụ ma nọgide na-eji ya dị ka ọ na-adị na mbụ. Mgbe oge ahụ gasịrị ọ gaghị ekwe omume iji weghachite akaụntụ anyị, na-amanye ịmepụta akaụntụ ọhụrụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịlaghachi n'elu ikpo okwu.
Budata ọdịnaya niile bipụtara na Instagram
Dịka m kwuru na ngalaba gara aga, ihe mbụ anyị ga - eme tupu ihichapụ akaụntụ Instagram, ọ bụrụhaala na anyị chọrọ debe ọdịnaya anyị bipụtara, bụ ime nkwado ndabere.
Iji rịọ Instagram otu ọdịnaya niile nke anyị bipụtara na netwọkụ mmekọrịta, anyị nwere ike ịme ya site na ngwa mkpanaaka ma ọ bụ site na kọmputa site na ihe nchọgharị ọ bụla.
Ozugbo anyị rịọrọ maka otu data anyị niile, ikpo okwu ọ ga-ewe kachasị nke 48 awa izitere anyị njikọ iji budata ọdịnaya a.
para budata ọdịnaya Instagram na smartphone anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Anyị na-enweta nhọrọ Mbido nke ngwa ahụ, site na ịpị akara ntanetị atọ gosipụtara na akuku aka nri elu.
Na-esote, pịa na Nche.
N'ime Nche, pịa na Budata data.
N'ikpeazụ, anyị ga-pịa Tinye ugbu a, mgbe ị kwadoro na email ahụ egosiri na akaụntụ ahụ anyị chọrọ ibudata ọdịnaya ahụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata ọdịnaya Instagram na PC, anyị ga-aga n'ihu dị ka ndị a:
Anyị na-enweta Ebe nrụọrụ weebụ Instagram ma banye data nke akaụntụ anyị.
Na-esote, pịa oyiyi nke avatar na ohere anyị Nhazi.
N'ime nhọrọ nhazi, pịa Nzuzo na nche, nhọrọ achọtara na kọlụm aka ekpe.
Ọzọ, anyị na-aga n'akụkụ aka nri wee chọọ nhọrọ ahụ Nbudata data wee pịa Rịọ maka nbudata.
N'ikpeazụ, anyị na-akwado na email egosipụtara kwekọrọ na akaụntụ anyị, anyị na-ahọrọ usoro HTML na pịa na-esote na-abanye na anyị paswọọdụ.
Ọ ka mma họrọ usoro HTML kama JSON, ebe nke a ga-enye anyị ohere ịnyagharịa data anyị niile n'ụzọ ahaziri ahazi site na njikọ.
El Sdị JSON, ọ bụ usoro ederede doro anya nke anyị nwere ike imeghe na ngwa ọ bụla mana ọ naghị agụnye njikọ, yabụ na anyị enweghị nhọrọ nke ịchọta ọdịnaya ahụ n'ụzọ dị mfe.
Etu esi gbanyụọ akaụntụ Instagram m nwa oge
Iji na-arịọ na deactivation nke akaụntụ anyị na Instagram, anyị ga-eji kọmputa ma ọ bụ ihe nchọgharị nke ama anyị, ebe ọ bụ na enweghị ike ịme usoro a ozugbo na ngwa ahụ.
Agbanyeghị na ọ bụghị usoro mgbagwoju anya, ọ dị ka site na Instagram ha achọghị ka ọ bụrụ usoro dịịrị onye ọ bụla site na ngwa ahụ n'onwe ya ma na-amanye ndị ọrụ tinye obere mgbalị iji mezuo ebumnuche gị.
Zọ kachasị mfe iji kwụsị akaụntụ Instagram nwa oge, na-agaghị agafe menu nhazi bụ ileta njikọ ahụ: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/.
Na-esote, anyị ga-ahọrọ ndị ihe mere anyị ji chọọ ịkwụsị akaụntụ ahụ. Dabere na nhọrọ anyị họọrọ, a ga-egosipụta ozi ndị ọzọ iji nyere anyị aka idozi nsogbu ndị nwere ike ịmanye anyị ịkwụsịtụ ọrụ anyị nwa oge n'elu ikpo okwu.
Ozugbo anyị ahọpụtara ihe kpatara ya, ka retype okwuntughe anyi Maka ikpo okwu iji hụ na anyị bụ ndị nwe ụlọ ahịa nke akaụntụ ahụ wee pịa nwa oge gbanyụọ akaụntụ ahụ.
Etu esi ebudata vidiyo Instagram na-enweghị mmemme
Regain eji nke agbanyụọ akaụntụ
Iji jiri akaụntụ Instagram nke anyị mechibidoro ọzọ, anyị kwesịrị nbanye mgbe ọ bụla anyị chọrọ, ma site na ngwa maka ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ site na ihe nchọgharị.
Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram m kpamkpam
Dị ka usoro iji mechie akaụntụ Instagram nwa oge, iji hichapụ akaụntụ Instagram kpamkpam, anyị enweghị ike ịrụ ọrụ ahụ site na ngwa ahụ n'onwe ya, ya mere a manyere anyị iji nsụgharị weebụ site na ihe nchọgharị ekwentị ma ọ bụ site na kọmputa.
Ma, ihe kachasị achọ ịmata gbasara ọrụ a bụ na ọ dịghị n'ime nhọrọ nhazi site na weebụ, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ nhọrọ ahụ, ị ​​nwere ike ịkwụsị ime ya, n'ihi na ị gaghị achọta ya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ihichapụ akaụntụ Instagram gị ruo mgbe ebighi ebi, anyị ga-emerịrị gaa na njikọ ndị a: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/
Ọzọ, anyị ga- họrọ ihe mere anyị ji chọọ ihichapụ akaụntụ. Dabere na ihe mere anyị ji họrọ, ikpo okwu ga-enye anyị nhọrọ dị iche iche nke na-anwa inyere anyị aka ịghọta otu ikpo okwu si arụ ọrụ. Nanị nhọrọ na-enyeghị anyị ozi ndị ọzọ bụ Ihe ọzọ kpatara ya.
para gosi nhichapụ akaụntụ, anyị ga-abanye paswọọdụ nke akaụntụ anyị. Nke a na-enye ohere ikpo okwu iji chọpụta na anyị bụ ndị nwe ezigbo akaụntụ ahụ yana na anyị anaghị emechi akaụntụ na akaụntụ nke onye na-ejikarị kọmputa ahụ eme ihe.
Na ngwụsị nke usoro a, ndị imecha anyị ga-enwetaghachi akaụntụ ahụ jiri ọdịnaya niile nke anyị bipụtara ugbu a. Mgbe ụbọchị ahụ gasịrị, anyị nwere ike ichefu iji weghachite ya ruo mgbe ebighị ebi.
Otu esi nwetaghachi akaụntụ Instagram ehichapụ
Dịka m kwuru na ngalaba gara aga, anyị nwere nanị ụbọchị 30 iji gbakee akaụntụ Instagram anyị ozugbo anyị mechara usoro niile iji mechie akaụntụ ahụ. Iji weghachite ya, anyị ga-abanye site na ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ site na ihe nchọgharị ọ bụla site na kọmputa.
Ọ bụrụ na ihe karịrị ụbọchị 30 agafeela, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na Instagram amalitebeghị ihichapụ akaụntụ gị kpamkpam, ọ gaghị ekwe omume iweghachite yaNaanị ihe ga-eme bụ imeghe akaụntụ ọhụrụ, yana ihe niile nke a pụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Instagram » Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram
Azịza Yahoo Emechiela: 8 Kasị Mma Ọzọ
Egwuregwu 8 kachasị yiri nke a na Fortnite